Maaskaro noocee ah ayaa loo gashan karaa ka hortagga iyo xakamaynta?
Maaskaro noocee ah ayaa loo gashan karaa ka hortagga iyo xakamaynta?
Dhawaan, Xafiiska Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Komishanka Caafimaadka Qaranka ayaa soo saaray "Hagaha Isticmaalka Maaskarada Pneumonia ee Ka-hortagga Caabuqa Novel Coronavirus", kaas oo si faahfaahsan uga jawaabay arrimo taxane ah oo ay tahay in shacabku fiiro gaar ah u yeeshaan marka. maaskaro xiran.
"Hagaha" wuxuu tilmaamayaa in waji-xidhashadu ay yihiin difaac muhiim ah si looga hortago cudurrada faafa ee neef-mareenka waxayna yareyn karaan khatarta caabuqa cusub ee coronavirus.Maskaxdu kaliya kama ilaalin karto bukaanka inuu buufiyo dhibcaha, waxay yaraynaysaa xadiga iyo xawaraha dhibcaha, laakiin sidoo kale waxay xannibi kartaa nukleiyada dhibco-fayrasku ku jiro waxayna ka ilaalinaysaa qofka xidha inuu neefsado.
Maaskarada caadiga ah inta badan waxaa ka mid ah waji-xidhaha caadiga ah (sida waji-xidhka waraaqaha, maaskarada kaarboonka firfircoon, maaskaro suuf ah, maaskaro isbuunyo, maaskaro faashad, iwm.), waji-xidho daawaynta oo la tuuri karo, waji-xidhka qaliinka caafimaadka, waji-xidhka ilaalinta caafimaadka, KN95/N95 iyo wixii ka sareeya waji-xidho ilaalin ah.
Maaskaro caafimaad oo la tuuri karo: Waxaa lagu talinayaa in dadweynuhu ay ku isticmaalaan goobaha caamka ah ee aan ciriiri ahayn.
Maaskaro qalliin caafimaad:Saamaynta difaacu way ka fiican tahay waji-xidhaha daawada ee la tuuri karo.Waxaa lagu talinayaa in la xidho inta ay ku jiraan wakhtiga shaqada, sida kiisaska la tuhunsan yahay, shaqaalaha gaadiidka dadweynaha, darawallada tagsiilayaasha, shaqaalaha fayadhowrka, iyo shaqaalaha goobta dadweynaha.
KN95/N95 iyo wixii ka sareeya maaskaro ilaalin qayb ka ah:Saamaynta difaaceedu way ka fiican tahay tan maaskaro qaliinka caafimaadka ah iyo maaskaro caafimaad oo la tuuri karo.Waxaa lagula talinayaa baaritaanka goobta, muunad iyo tijaabinta shaqaalaha.Dadweynuhu waxa kale oo ay ku xidhan karaan meelaha dadku ku badan yahay ama meelaha dadweynaha ee xidhan.
Sidee loo doortaa maaskarada saxda ah?
1. Nooca maaskaro iyo saamaynta ilaalinta: maaskarada ilaalinta caafimaadka> Maaskarada qaliinka caafimaadka> maaskaro caafimaad oo caadi ah> maaskaro caadi ah
2. Maaskarada caadiga ah (sida maro suuf ah, isbuunyo, kaarboon firfircoon, faashad) waxay ka hortagi karaan oo kaliya boodhka iyo cirridka, laakiin kama hortagi karaan faafitaanka bakteeriyada iyo fayraska.
3. Maaskaro caafimaad oo caadi ah: waxaa loo isticmaali karaa meelaha dadku isugu yimaadaan ee aan cidhiidhiga ahayn.
4. Maaskaro qalliin oo caafimaad: Saamaynta ka ilaalintu waxay ka fiican tahay waji-xidhka caafimaadka ee caadiga ah waxaana lagu gashan karaa meelaha dadku ku badan yahay ee meelaha dadku isugu yimaado.
5. Maaskaro ilaaliya caafimaadka (N95/KN95): oo ay isticmaalaan shaqaalaha caafimaadka ee safka hore marka ay la xidhiidhaan bukaanka la xaqiijiyay ama looga shakisan yahay sambabada halbowlaha wadnaha, rugaha qandhada, sahan goobta jooga iyo shaqaalaha baaritaanka, waxaana sidoo kale lagu gashan karaa meelaha dadku ku badan yahay. ama goobaha dadweynaha ee xiran.
6. Marka laga hadlayo ilaalinta novel coronavirus pneumonia, waji-xidhka caafimaadka waa in la isticmaalo halkii laga isticmaali lahaa suuf caadi ah, faashad, kaarboon firfircoon iyo waji-xidho kale.